Iibso Barta Iibinta ee Iibinta Bakhaarka | Martech Zone
Dukaamee Goobta Iibka ee Iibinta Bakhaarka
Jimcaha, Sebtember 6, 2013 Axad, Abriil 26, 2020 Douglas Karr
Waad ogtahay inaad ka shaqeysid warshad qallafsan marka nidaamyadaadu ay duugoobayaan sababtoo ah warshadaha internetka ee gadaal ka shaqeynaya. Tani waa barta ganacsiga. Markii aan ka shaqeynayay tiknoolajiyada tafaariiqda dhowr sano ka dib, shirkadaha POS waxay ahaayeen burcad aad u qurux badan. Waxaan dooneynay inaan la shaqeyno oo aan la jaanqaadno iyaga, laakiin waxay noo arkeen inaan nahay hanjabaad waxayna naga xireen banaanka. Badankood waxay u badnaayeen maxaa yeelay tiknoolajiyaddoodu aad bay u xumayd. Waxay wali ku shaqeynayeen 199x interface Interfaces, waxay lahaayeen arrimo amni oo aad u ballaaran, ganacsigooduna wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo kaliya iibinta kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ee kumbuyuutarrada leh shaashadaha taabashada saddex jeer ka badan intii ay u qalmeen.
Waan ku faraxsanahay inaan ku arko horumarkaan Engadget, Nidaamka tafaariiqda isku-dhafan ee Shopify ayaa isku daraya iibka internetka iyo dukaanka.
Dukaamee POS waa codsi iPad ah oo kuu oggolaanaya inaad ku iibiso badeecadaha dukaankaaga Shopify qaab jireed, tafaariiqeed. POS waxay ka dhigeysaa dhammaan isdhexgalka iyo iskudhafka udhaxeeya qadka iyo khadka tooska ah mid aan quseyn maxaa yeelay dhamaan wax soo saarka, macaamiisha iyo amarada dhamaantood waa hal meel - qadka
Tafaariiqleyda mar dambe uma baahna inay raad raac ku sameeyaan alaabooyin badan, buugaagta alaabada, iyo nidaamyada lacag bixinta. Dukaanku wuxuu isku daraa dhammaan dhinacyada ganacsiga tafaariiqda hal madal oo si sahlan loo isticmaali karo oo la socota kaarka wax lagu beddelo si loo aqbalo kaararka deynta ee VISA, MasterCard iyo American Express. Akhristaha kaarkooda, waxaad sidoo kale helaysaa qiimayaal lacag bixin oo aad u fiican - 2.1% + 30 ¢ dhammaan kaararka deynta. Ma jiraan ajuuro qarsoon ama kharashyo adag.
Waad hagaajin kartaa bartaada nidaamka iibka qalabka loogu talagalay Shopify POS, oo ay ku jiraan akhristaha kaarka deynta, khaanadda lacagta, Istaadka iPad iyo warqadda risiitka. Dalbo khadka tooska ah iyo rarku waa bilaash.
Shakhsiyan, waan jeclahay inaan arko tan. Ma sugi karo ilaa qaar ka mid ah shirkadahaas POS ay ka baxayaan ganacsiga daaweynta macaamiishooda iyo la-hawlgalayaashooda si aad u xun.
Tags: barta iibkaPOSdukaanka
Signal: Ku wada xiriir SMS, Email, Twitter iyo Facebook